Inkastoo Soomaalida ku dhaqan dal iyo dibed ay si weyn uga qiiroodeen go’aankii dowlada Somalia dhigeeda Itoobiya ugu gacan gelisay C/kariin Qalbi-dhagax oo ka tirsanaa Jabhada ONLF, haddana waxaa aad loo aaminsan yahay in arintaas aad loo buunbuuniyey.
Wax cusub maaha in dowlad caalamka ka tirsan ay dowlad kale ku wareejiso qof ay doon dooneysay balse wareejinta Qalbi-dhagax xiisada ka dhalatay ayaa salka ku heysa Soomaalida oo xasaasiyad ka qabta Itoobiya, maadaama labada dal ay horey dagaalo badan u soo dhexmareen.
Iyadoo arintaas ay jirto ayaa kiiska qalbi dhagax waxaa fursad dahabi oo cirka ka soo dhacday u arkay cadow fara badan oo dowlada Somalia markii horeba ul nooc ah ugu tukubayey, waxayna baraha bulshada iyo goobaha lagu kalmo ku baahiyeen dacaayado ka dhan ah dowlada iyo madaxda sare iyagoo sheegaya iney ku kaceen qayaano Qaran iyo wax la mid ah, waxayna arinta qalbi dhagax gaarsiiyeen meel halis ah oo ay ku sigatay inuu dhaco kacdoon dadweyne oo qatar gelin karay jiritaanka dowlada Somalia.
Dhinacyada arintaas ka faaiideystay waxaa ugu weynaa:-
1-Siyaasiyiin Mucaarad ah oo xilal ka soo qabtay dowladii hore, kuwaasoo hankoodu uu ku kooban yahay oo kaliya iney jagooyin ka helaan dowlada madaxweyne Farmaajo oo ay liiskeeda iska waayeen, waxaana siyaasiyiintan ay baraha bulshada iyo warbaahinta u adeegsadeen fidinta dacaayadahooda iyagoo iska dhigaya sidii iney wadaniyiin yihiin.
Kiiska qalbi dhagax oo ahaa mid gilgilay dowlada saameyn baddana yeeshay ayaa hadda u muuqda mid iska damay ka dib markii shacabka Soomaaliyeed ay fahmeen ujeedada guracan ee laga lahaa arrintaas oo aheyd in lagu dumiyo dowlada Soomaaliya, meeshana laga saaro iftiinka yar ee u baxay qaranimada dalka.
Maxaa dhici lahaa haddii dowlada Somalia diidi laheyd iney itoobiya ku wareejiso Qalbi dhagax?
Itoobiya waa dowlad saameyn milateri iyo mid siyaasadeedba ku leh Soomaaliya, waxayna galangal xooggan ku leedahay dowlad goboleedyada ka jira dalka oo xiriir toos uu ka dhexeeyo sidaas awgeed haddii dowlada Somalia ay ka cagajiidi laheyd wareejinta qalbi dhagax waxay taasi horseedi laheyd inuu xumaado xiriirka labada dowladood.
Siyaasiyiinta hadda iska dhigaya wadaniyiinta haddii qalbi dhagax loo diidi lahaa Itoobiya dhanka kale ayey fekerkooda u rogi lahaayeen waxayna ku doodi lahaayeen in hal nin oo Jabhad ah awgeed ay dowlada Soomaaliya u xumeysay xiriirkii kala dhexeeyey dowlada Itoobiya oo ciidamo badan ay ka joogaan Soomaaliya, kuwaasoo dowlada ka difaaca weerarada Al-shabaab.
Waxay kaloo dadka ka dhaadhicin lahaayeen in Madaxweyne Farmaajo sabab qabiil awgeed uu u diiday inuu Itoobiya ku wareejiyo Qalbi dhagax, maadaama ay ka soo wada jeedaan beesha Daarood, sidaas awgeedna uu halis u geliyey jiritaanka iyo qaranimada Somalia maadaama nin ay isku qabiil yihiin darteed uu u xumeeyey Itoobiya oo saameyn ku leh arrimaha Somalia.
Haddaba marka arimahaas oo dhan meel la iska dhigo, ciidamada Itoobiya waxay la dagaalamaan Al-Shabaab oo ah mucaaradka hubeysan ee dowlada Somalia, sidee suuragal ku tahay in dowladeena ay gabaad siiso rag ka tirsan mucaaradka hubeysan ee Itoobiya?.
Si dhibaatada ka dhalatay kiiska Qalbi dhagax oo kale looga fogaado waxaa dowlada Somalia la gudboon labo qodob oo kala ah:
1-Iney xubnaha Jabhada ONLF ee ku sugan dalka ku wargeliso iney dalka isaga baxaan, isla markaana raadsadaan meelo kale.
2-In la helo, heshiisyo, shuruuc iyo nidaam dowli ah oo lagu maareeyo haddii uu soo laabto kiiskan oo kale ama loo baahdo in dowlad kale lagu wareejiyo shaqsiyaad la doon doonayo.
September 14, 2017 Geesey